A kpọkuola gọọmenti etiti ka Ọ kwụọ Steeti Anambra ụgwọ O ji ya
A kpọkuola gọọmenti etiti ka o were ọsọ were ije kwụọ gọọmenti steeti Anambra ego karịrị ijeri naịra iri anọ na atọ, bụ ụgwọ o ji ya maka ụfọdụ iro na àkwà dịịrị ya bụ gọọmenti etiti, ọ rụrụ.
Ọkpụkpọ oku ahụ bụ nke e mere site n'aka otu jikọtara ndị okenye steeti Anambra, bụkwa nke ha mere ka a mara site n'ozi ha kụpụrụ banyere nkwekọrịta iteghete ha mere ka ha nwechaara ọgbakọ ha nke mbụ n'ahọ a, bụ nke weere ọnọdụ n'ebe obibi gọvanọ dị n'Amawbịa.
Na ya bụ ozi ha kụpụrụ banyere ihe ndị ahụ ha kwekọrịtara, bụ nke a gụpụtara sịte n'ọnụ onyeisi ngalaba ndụmọdụ ndị otu a ma bụrụkwa ode akwụkwọ izugbe nke otu "Commonwealth" n'oge gara aga, bụ Chiifu Emeka Anyaọkụ; ndị otu a kpọkuru gọọmenti etiti ka o mee ngwa banyere nke ahụ. Ha nọkwara n'oge ahụ gosipụta obi mwute ha banyere otu ndị Fụlani na-achị ehi si akụ akụmakụ dị iche iche na mpaghara dị iche iche n'ala anyị, ọ kachasị mgbusi ahụ ha gbusiri ndị mmadụ na steeti Benue nso nso a.
Ka ha na-akpọ oku ka e guzobe agbụgbọ ehi dịka ụzọ kacha mma e si azụ ehi na ụfọdụ anụ ụlọ ndị ọzọ; ndị otu a kpọkuru gọọmenti steeti Anambra na gọọmenti steeti ndị ọzọ ka ha ghara ịnabata ka e wepụta ala ọbụla maka ndị Awụsa na-achị ehi na steeti ha dị iche iche maka nke ahụ ga-ebi ọnọdụ nchekwa aka ọjọọ na steeti ọbụla ha batara.
Ndị otu n'ótù aka ahụ jikwara ohere ahụ kpọọ oku ma kọwaa mkpa ọ dị ka ndị niile selitere isi na mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ bịakọọ ọnụ ma were otu olu tisie mkpu ike banyere oku ahụ a na-akpọ banyere ịhazigharị ala anyị iji wee weta ezi ọchịchị, ịdị n'otu na ọganihu nke ala anyị.
Ha toro gọvanọ Willie Obianọ na osote ya bụ dọkịnta Nkem Okeke banyere nturu ugo ha dara ụda na nhọpụta ọkwa gọvanọ ahụ e mere n'abalị iri na asatọ nke ọnwa Nọvemba ahọ gara aga; rịọ ha ka ha jide ka ha ji n'ọrụ mmepe n'aga n'ihu na steeti ahụ; ma kpọkuziekwa ọhanaeze ka ha bịa rita uru n'ohere ọma ahụ dị na steeti ahụ ugbu a site n'iwunye ihe mwunye, azụm ahịa ma ọ bụ ịbagide n'ọrụ aka dị iche iche.
Ndị ukwu ukwu sonyere n'ọgbakọ ahụ gụnyere: aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ; osote ya bụ Dkt. Nkem Okeke, ndị gọvanọ chịbụrụ steeti ahụ n'oge gara aga, ndị eze ọdịnala, ndị ndu ụka dị iche iche, ndị nnọchite anya Ọhanaeze Ndị Igbo, na ọtụtụ ndị ọzọ.